हाम्रो बारेमा at Musatalent
किन MUSA छनौट गर्नुहोस्
हामी पेशागत टोली हौं जो वर्षौंको लागि फेसन, सिनेमा र टेलिभिजन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन, उनीहरूको कला यस संसारमा प्रवेश गर्न चाहनेहरूलाई उपलब्ध गराउन। महान् मास्टरहरूको मार्गनिर्देशनको लागि धन्यबाद, हामी मेड इन इटालीको कला र स्वाद संसारमा सार्छौं! एक टीम जो एक मेक-अप विशेषज्ञको रूपमा बाहिर खडा हुन चाहनेहरूमा विश्वास राख्छ! एक पेशेवर जसले पेशेवर प्राविधिक ज्ञान र विशिष्ट उपकरणहरू र उत्पादनहरूको शोधको ज्ञान राख्छ र शैली, फेसन र छवि सिर्जना गर्दछ।
गुणवत्ता र व्यावसायिकता
एकेडेमी अप-टु-डेट र आधुनिक शिक्षण प्रविधिको प्रयोग गर्दछ। ट्यूटर टोली फेशन, मेक-अप, शैली र छवि क्षेत्रहरूबाट मास्टर्सबाट बनेको हुन्छ। तिनीहरूको ठूलो जोश र व्यावसायिकता उनीहरूको विद्यार्थीहरूको लागि अद्भुत कलात्मक शिल्पमा सर्दछ। ग्यारेन्टी ग्यारेन्टी भनेको उच्च पेशेवर आधुनिक भिडियोहरूको सिर्जना हो। उद्योग मा सबै भन्दा ठूलो मास्टर को सबै रहस्यहरु तपाइँमा प्रसारित हुन्छ, भविष्य को पेशेवर!
महान् मास्टरहरूको मार्गनिर्देशनको लागि धन्यबाद, हामी मेड इन इटालीको कला र स्वाद संसारमा सार्छौं!
खर्च र यात्राको सामना नगरी विशेषज्ञताको लागि योग्य हुनको लागि तपाईंको समयलाई अप्टिमाइज गर्नुहोस्, जब तपाईं चाहानुहुन्छ आराम र जब तपाईं चाहनुहुन्छ!
प्रमाणपत्रले प्राप्त गरेको सीपहरू प्रदर्शन गर्न व्यावसायिक कौशल प्रमाणित गर्दछ, जस्तै क्षेत्रहरू पहुँच गर्न आवश्यक: फेसन, सौन्दर्य, थिएटर, संगीत, सिनेमा, विज्ञापन, पसलहरू र अधिक।
हामी सौन्दर्यको लागि उत्कट छौं! हामी शैली को मालिकहरु! हामी एक प्रतिष्ठान हौं जुन मुस्कान र हाम्रो आकांक्षी मेक-अप र छवि कलाकारहरूको आशा मार्फत उत्साहित हुन्छ!
हामी पेशागत टोली हौं जसले वर्षौंको लागि फेसन, सिनेमा र टेलिभिजन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन, जसले उनीहरूको कला यस संसारमा प्रवेश गर्न चाहनेलाई उपलब्ध गराउँछ।
एउटा सुन्दर काम सिक्ने नयाँ तरिका। जब तपाईं चाहानुहुन्छ उच्चतम व्यावसायिक स्तरको प्रशिक्षण पहुँच गर्न सक्षम हुँदै।
उच्च प्रशिक्षण न्यूनतम खर्च!
भिडियो कोर्स बेचियो
के तपाईं सुन्दर कलाकार बन्न सक्नुहुन्छ?
यो प्रश्नको जवाफ दिनको लागि कि मुसा प्रतिभाको शुरुआतमा जन्म भएको थियो, समयको साथ क्रमशः उन्नत प्रशिक्षणको विचार विकास गर्दै, विशाल क्षेत्र, जस्तै इटालियन र एक विश्वको प्रतिनिधिको रूपमा।
प्राचीन समयमा, श्रृंगार केवल शरीरको छवि सुशोभित गर्ने कार्यको साथ जन्म भएको थियो, तर यो पहिचान र विभिन्न जातीय समूह र जातिसँग सम्बन्धित सांस्कृतिकको अवधारणासँग सम्बन्धित छ।
फेसन, कला र डिजाइन
एकेडेमीले धेरै वर्षदेखि श्रम बजारले अनुरोध गरेको कला र शिल्प सम्बन्धी सीपहरू स्थानान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ कार्य गर्दै आएको छ र विशेषगरी मेड इन इटालीको बाह्यता र बहुसांस्कृतिक पहुँचको उत्सव मनाउँदै फेसन, कला र डिजाइन को माध्यम बाट इटालियन विरासत।
संसारमा फेसन उत्पादन
संस्थापकहरूले यो धारणाबाट सुरू गरे कि फेशनले ब्यबहार, रीतिथिति र संस्कृतिको पुन: उत्पादन गर्दछ। फलस्वरूप, कस्ट्युमको मानवताको यो अवधारणाले किन प्रत्येक सभ्यताले आफ्नो शैलीलाई प्रतीकात्मक र महत्वपूर्ण चरित्रको साथ संचार गर्दछ र कलाको माध्यमबाट, जुन मानव कार्य हो। त्यसकारण, मेक-अप कलाकारको बाहेक अन्य क्षेत्रहरू अन्वेषण गर्ने निर्णय गरियो, जस्तै "पोशाक" र "फेशन"।
कला अस्तित्वमा जन्म भएको छ!
इटाली, इटालियनहरू… नेभिगेटरहरू, आविष्कारकहरू, कलाकारहरू।
इटाली ... सडकहरूको आविष्कारको माध्यमबाट पवित्र रोमन साम्राज्यको पालना
पृथ्वी शैली, राम्रो स्वाद र सबै मानिसहरूका लागि सँधै ज्ञात गरिएको छ
सौंदर्य सौन्दर्य को महत्त्व।
फेसनहरू र चलनहरूको अग्रदूतहरू।
हामी! हामी अद्वितीय छौं ... अपरिहार्य… हुनमा गर्व।
धन्यवाद संसारमा इटालियन हुनु भएकोमा!
हाम्रो विद्यार्थीहरूको समीक्षा
२ reviews समीक्षामा आधारित
द्वारा महसुस फेसबुक
मैले मेरो नेल आर्ट प्रेमिकालाई कोर्स दिएँ। उसले यो मन परायो र भन्यो कि यो उसलाई दिए... धेरै भावनाहरु। हिजो उनीसँग पहिलो ग्राहक थियो र उनी धेरै राम्रो थिइन् र ग्राहक खुसी छिन्! धन्यवाद मस्यालेन्ट 😁❤पढ्नुहोस् ...
डायना मारिया Ionita
सुन्दर भिडियो कोर्स, म यो प्रविधिको कारणले गर्दा दुबै मेरोलागि र पेशेवर कारणले गर्दा बलियो थियो... यो hyaluron कलम को लागी अनुरोध गर्नुहोस्। मलाई यस एकेडेमीको अनलाइन कोर्सहरू सिफारिस गरिएको थियो र मसँग साँच्चै ठूलो समय थियो। भिडियो अनुसरण गर्न सजिलो छ, धेरै स्पष्ट छ र सबै भन्दा माथि यस विधिको लागि आवश्यक सबै व्यावसायिक मापदण्डहरूको पालनामा व्याख्या गरिएको छ, सतही र खतरनाक DIY ट्यूटोरियलहरू युट्यूबमा फेला परेन। सुपर सिफारिस गरिएको !!पढ्नुहोस् ...
मैले मेरी श्रीमतीलाई एउटा उपहार दिएँ र भिडियोहरू खरीद गरें hyaluron कलम विधि लागू गर्ने विधिहरू, è... धेरै खुसी पाठ्यक्रम राम्रोसँग सकियो र शिक्षकले बृहत्तर व्यावसायिकताका साथ सबै चरणहरू वर्णन गर्छन्। शटहरू उत्कृष्ट र स्पष्ट छन् र प्रणालीले तपाईंलाई सँधै भिडियो समीक्षा गर्न अनुमति दिन्छ र जब तपाईं यसलाई चाहनुहुन्छ। तपाइँको छाप्न को लागी एक सुंदर लिखित ह्यान्डआउट पनि समावेश छ। महान मूल्य गुणस्तर!पढ्नुहोस् ...
मैले मेरो अनुभवलाई पुन: पोस्ट गरे पछि मेरो समीक्षा हटाईएको छ। मैले hyaluron पेन ​​कोर्स, भिडियो किनेको छु... यो खराब छ, क्यामेरामेन staggers र न त कलम को आवेदन को स्थिति वा केटीको ओठ ध्यान केन्द्रित गर्दछ। मलाई लाग्छ कि यूट्यूब भिडियो अधिक उपयोगी छ ... pdf को रूप मा, वास्तवमै सतही, अनुभवहीन हुन आधारभूत लगभग सहज।पढ्नुहोस् ...
जियुलिया अन्ना डी ओराजियो
मैले कक्षाकोठाको उपस्थितिको अपेक्षामा hyaluron कलम भिडियो कोर्स खरीद गरें, यो वास्तवमै राम्रो र राम्रोसँग भयो!... शिक्षक प्रदर्शनीमा स्पष्ट छ र विभिन्न चरणहरू धेरै सहज र अनुसरण गर्न सजिलो मानिन्छ! म कक्षाकोठाको भागमा जानको लागि कुर्दिन सक्दिन 🙂पढ्नुहोस् ...
मलाई लोरिस र मलाई वरपरका सबै स्टाफलाई सल्लाह दिनको लागि उनीहरुलाई संगठनका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु... पाठ्यक्रमहरूको म मेरो सवारीको लागि मसुस्यालेन्ट छनौट गर्न पाउँदा खुसी छु तपाईको उपलब्धता र धन्यवादको लागि धेरै धेरै धन्यबाद।पढ्नुहोस् ...
सुपर प्रोफेशनल .. तिनीहरू जोशका साथ काम गर्छन्! म बिल्कुल सिफारिस गर्दछु ♥ ♥
टाटियाना डि जियोआ
स्वच्छ वातावरण, धेरै मैत्री स्वागत टीमहरू, सफा र त्रुटिहीन संगठन... तयार हुनुहोस् .. उच्च स्तरको व्यावसायिक पाठ्यक्रमहरू।सुपर अत्यधिक सिफारिस गरिएको।पढ्नुहोस् ...
मैले तपाईको व्यावसायिकतामा साँच्चिकै बधाई दिनुपर्दछ !!! गम्भीर, सँधै उपलब्ध, शीर्ष उत्पादनहरू, र तपाइँ पनि गर्नुहुन्छ... सबैको लागि पहुँच मूल्यहरू सहित वास्तवमै प्रभावकारी पाठ्यक्रमहरू। हामी भविष्यमा सहयोगको लागि तत्पर छौं।पढ्नुहोस् ...
म पूरै एक वा बढी म्यास्यालेन्ट कोर्सहरू लिने सिफारिस गर्दछु किनकि उनीहरू साँच्चिकै शानदार छन्! क्वारेन्टाइनमा मसँग छ... मैले यो वास्तवमै पेशेवर एकेडेमीलाई राम्ररी चिनेको छु र यसलाई बनाउने सबै पेशामीहरूसँग र म मेकअप कोर्समा प्रयास गर्न चाहान्छु। साँच्चिकै राम्रो पाठ्यक्रम, सजिलैसँग बुझ्नको लागि जो यस संसारमा पहिलो दृष्टिकोणमा छन्। मैले तुरून्तै अवधारणाहरूलाई अभ्यासमा राखें र म वास्तवमै धेरै सुधार भएको छु। मैले कामको लागि केहि मेकअप गर्न थालें र म खुसी छु। किनभने सम्भवतः म अन्ततः मलाई के गर्न उत्साहित गर्नेछु र केहि पैसा कमाउन पनि सक्षम हुनेछ - म्युस्यालेन्ट एकेडेमी धन्यवाद, हामी छिट्टै तपाईको अर्को पाठ्यक्रमको बारेमा सुन्नेछौं जुन मैले पहिले नै गर्न खोजेको छु!पढ्नुहोस् ...
स्टेफानिया अमांडा बाथरी
म एक पेशेवर सौन्दर्य अपरेटर हुँ म आफ्नो कला विस्तार गर्न र मलाई प्राप्त गर्न यस प्रतिष्ठानमा फर्कें... तत्काल उत्कृष्ट र उच्च प्रशिक्षित शिक्षकहरूको माध्यमबाट सौन्दर्य र सौन्दर्यको क्षेत्रमा विभिन्न विशेषज्ञताहरू सिक्नको लागि अत्यन्त व्यावसायिकता दिइयो। म धेरै सन्तुष्ट छु जब म पाठ्यक्रमहरू हरेक पटक समाप्त गर्दछु मँ सधैं एक द्रुत र उल्लेखनीय पेशेवर र आर्थिक प्रतिक्रिया थियो। धन्यवाद मस्यालेन्ट एकेडेमीपढ्नुहोस् ...
पेशेवरहरू जो उनीहरूको काम मन पराउछन्, सधैं उपलब्ध छन् र हामीलाई उनीहरूको काममा अपडेट गर्न तयार छन्... क्युरेट गरिएको, स्पष्ट र उपयोगी स्पष्टीकरणको लागि जो मसँग, मलाई यो संसार जस्तो मन पराउँछन् ⭐⭐⭐⭐⭐पढ्नुहोस् ...
बिभिन्न प्रकारका उत्कृष्ट कोर्सहरू .. प्रत्येक कोर्सका प्राध्यापकहरू धेरै तयार र पेशेवर छन् .. म सिफारिस गर्दछु... सबै यदि तपाईं शीर्ष तयारी चाहनुहुन्छ भने!पढ्नुहोस् ...
म पाठ्यक्रमहरू सिफारिश गर्दछु, धेरै पूर्ण, मैत्री व्यक्ति, पेशेवर .. म सबै स्टाफलाई धन्यवाद दिन्छु।
म विभिन्न म्यास्यालेन्ट पाठ्यक्रम मध्ये दुईमा भाग लिएँ: माइक्रोब्लाडिing र Ialuronic कलम। क्षेत्र मा ज्ञान प्राप्त गर्नुहोस्... म्यूसालेन्टसँगको सौन्दर्यको अर्थ बिस्तारै सौंदर्यशास्त्रको विशाल संसारको हरेक क्षेत्रमा सही र सही ज्ञान भएको सपना साकार पार्नु हो, अद्वितीय तयारी गर्ने निश्चितता शिक्षकहरूले मात्र दिएका छन् जो केवल विशेष मात्र नभई भावनात्मक पनि छन् र पर्याप्त संचारको साथ प्रस्ताव गर्न पर्याप्त सक्षम छन्। तपाईं हरेक विवरण को एक प्रभावी व्याख्या। सबै आतिथ्य, मित्रता, सौहार्द र महान उपलब्धता संग कुनै शंका वा समीक्षाको लागि सम्पर्कमा रहनुहोस्। अन्तिम तर कम्तिमा होइन: पैसाको लागि मान। म विश्वास गर्छु कि सही र व्यावसायिकता को लागी पाठ्यक्रम अधिक खर्च गर्नु पर्छ। मस्यालेन्टको मूल्यहरू कुकुरहरू र सुँगुरहरूको लागि जस्तै हुन् जो पाठ्यक्रमहरू गर्छन् तर तिनीहरूलाई कसरी गर्ने र क्षेत्रको तीस वर्षको अनुभव बिना नै जान्दछन्। धन्यवाद Musaa!पढ्नुहोस् ...
उत्कृष्ट पाठ्यक्रम, उत्कृष्ट अनुभवको शिक्षकको साथ
गम्भीर, पेशेवर र तयार !!!
क्रिस्टिना अवरवरे रसू
Graniiiiii! सबैलाई उनीहरूको व्यावसायिकता को लागी बधाई छ, विशेष गरी लुना को लागी !! ! म तपाईंलाई चुनिएकोमा धेरै खुसी छु... म दौडिरहेछु! तपाईं एक नम्बर हुनुहुन्छ! 😘😘😘😘पढ्नुहोस् ...
शुभ साँझ सबैलाई .... मेरो नाम फ्रान्सेस्का हो र म रीतीबाट आएको हुँ ... विगतमा मैले अयोग्य "अकेडमी" मा भाग लिएँ... यो नाम किनभने यसमा शिक्षणको अभाव र यस्तै अन्य ....! अन्ततः मैले तपाईंलाई, ग्रेट प्रोफेश्नलिज्म, पाठ्यक्रम र शिक्षामा भेट्टायो! मैले यी days दिनहरूमा पढेको पाठ्यक्रम मेरो जीवनको सबैभन्दा सुन्दर कोर्स थियो! महान कर्मचारी, तर सबै भन्दा माथि। हाम्रो शिक्षिका लुना, जसले उनको व्यावसायिकता, प्रतिभा र जोशले उनीमा के गर्छिन्, मेरो व्यावसायिक भविष्यका लागि मलाई समृद्ध तुल्याइदिएका छन्। मेरा सहकर्मीहरुलाई यी शानदार दिनहरूको लागि धन्यवाद छ ... र यी सबै भन्दा धेरै सकारात्मक र असंख्य हाँस्नका लागि धन्यवाद! सबैलाई धन्यवाद! म तपाईंलाई माया गर्दछु! यी दिनहरूमा मैले सिकेका सबै कुरा मेरो जीवनमा प्रयोग हुनेछन् र यस क्षेत्रमा मात्र होइन! यो अनौंठो अनुभव हो जुन म सधैं मेरो हृदयमा लिन्छु! म तपाईंलाई धेरै सम्झन्छु! ❤❤❤❤❤पढ्नुहोस् ...
राम्रो व्यावसायिकता, स्पष्ट र सरल स्पष्टीकरणको साथ भिडियो कोर्सहरू। निश्चित सिफारिश!
तपाईंको भविष्यका लागि पेशेवरहरू
PMU शिक्षक र MUSA मेक-अप
शिक्षक बनाउनुहोस् मुसा
मोड मूस को कला निर्देशक
प्रशिक्षण निर्देशक मुसा
डा। Ilaria La Mura